किन हुन्छ योनि बाहिरी छाला कालो ? – MeroJilla.com
किन हुन्छ योनि बाहिरी छाला कालो ?
प्रायःजसो महिलाहरुको शरिरको छालाभन्दा योनिको बाहिरी छाला फरक हुन्छ ।
महिलाहरु आफ्नो शरीरको रङसँग योनी बाहिरको छाला किन कालो भएको होला भनेर सोच्ने गर्दछन् । योनीको छाला कालो हुनु र अन्य कुराहरुमा केही सम्बन्ध हुन्छ कि भन्ने उनीहरुको चासो हुन्छ । यौनसम्पर्क गरेर कालो भएको कतिपयले महिलाहरुको सोचाई हुन्छ । तर के यी सोचाईहरु साँचो हुन त ? पुरुषको लिङ् र योनीको बाहिरी छाला किन कालो हुन्छ ? जानौं यसबारेमा ।
बागलुङ शिसाखानी मेडिकलमा मासिक रुपमा विशेषज्ञ सेवा सुरु	Sunday, August 5th, 2018